Inqwaba kubasebenzisi nakule seva ingangcwatshwa kungazelelwe. Ngasinye salezi zicelo sithatha isikhathi. Isikhathi sibaluleke kakhulu - noma ngabe umsebenzisi ulinde ikhasi elizolayishwa noma i-bot yenjini yokusesha eza ukuzokhipha okuqukethwe kwakho. Zombili lezi zimo zingalimaza ibhizinisi lakho uma isiza sakho sihamba kancane. Kuyintshisekelo yakho ukugcina amakhasi akho ekhanya futhi eshesha - ukuhlinzeka umsebenzisi ngesiza esisheshayo kungakhuphula ukuthengisa. Ukunikeza iGoogle ngesiza esisheshayo kungathola amakhasi akho amaningi akhonjwe futhi atholakale
Uma uvuliwe WordPress, Jetpack inikeza i-CDN yayo enamandla kakhulu. Sisingatha isiza sethu ku- ligcina uthi lokuphotha luzungeza ofaka i-CDN nensizakalo.
Ukulethwa kwakho kokuqukethwe akudingeki kukhawulelwe ezithombeni ezimile, noma. Ngisho namanye amawebhusayithi ashukumisayo angakhonjiswa ngama-CDN. Izinzuzo zama-CDN ziningi. Ngaphandle kokwenza ngcono ukubambezeleka kwesiza sakho, ama-CDN anganikeza ukukhululeka kumithwalo yakho yeseva yamanje nokuqina kahle ngaphezu kwemikhawulo yabo yehadiwe.